Cilmi Baadhis lagu Ogaaday Faa’iidooyinka Hurdadu U Leedahay Maskaxda Iyo Xifdiga Qofka - Haldoor News | Haldoor News
Cilmi Baadhis lagu Ogaaday Faa’iidooyinka Hurdadu U Leedahay Maskaxda Iyo Xifdiga Qofka
August 21, 2015 - Written by admin
Koox cilmibaadheyaal ah ayaa natiijo ay dhowaan soo saareen ku sheegay in habeenkii oo si fiican loo seexdaa door weyn ka ciyaarto qaybta xifdiga ee maskaxda oo si wanaagsan u shaqaysa iyo awood waxbarasho oo uu qofku yeesho maskax ahaan.
Kooxdan khubarada ah ayaa ka kala socday dalalka Maraykanka iyo Chine ,waxay natiijadooda ku sheegeen inuu jiro xidhiidh balaadhan oo u dhexeeya hurdada dhamayska tiran waqti ahaan ee qofku qaato iyo isku xidhka qaybaha dareenka ee dadka ,gaar ahaana qaybaha loo yaqaano Neurons-ka.
Inta ugu badan waxa tijaabooyinka daraasadan dhexdeeda la samaynaayey aad uga qayb qaatay labada jaamacaddood ee New York University iyo Peking university ,iyaga oo labadaasi si wada jira u tabobaray jiir nooca loo yaqaano Mice ka ah ,kaas oo loogu talogalay in lagu sameeyo tijaabooyinka ay samaynayaan .
Laba kooxood oo jiirkaas ayaa qaarkood loo ogolaaday inay helaan hurdo dhamaystiran ,halka kuwo kalena laga dhigay kuwo aan hurdo helin,kadinba lagu tijaabiyey qalab loogu talo galay oo halkaasi yaaley,waxaana loo isticmaalay laser gaara oo loo yaqaano Scanning Microscopes,kadinba waxa labada kooxoodba la tijaabiyey maskaxdooda oo qalabkaasi lagu rakibay.
Kooxdaasi la seexiyey ayaa ahayd kuwo maskaxdoodu muujisay waxyaalo badan oo garasho ah sidoo kalena laga ogaadey maskaxda dhexdeeda xidhiidh balaadhan oo ay sameeyeen unugyada neerfaha ah ee neurons-ka loo yaqaanaa.
Natiijadan ayaa sidoo kale muujisay in hurdadu caawiso xidhiidh ay sameeyaan neurons-ku ,kuwaas oo ay iyagana kasii farcamaan isku xidh u dhexeeya qaybaha kale ee maskaxda,gaar ahaana qaybta loo yaqaano dendritic spines –ka taas oo xidhiidh dhow la leh qayta xusuusta dheer ee maskaxda.
“waxa keliyaata ee aanu markii hore ka fikiraynay waxay ahayd caawimada hurdadu siiso maskaxda,laakin waxaanu u galay cilmi badan oo aanan hore u ogayn,waxaanu ogaaney waxyaalo badan oo ay sababto,waxaanu xaqiiqdii ogaaney isku xidhka ay hurdadu samayso ee qaybaha kala duwan ee maskaxdu samayso,waxaanay soo celisaa waxyaalihii dhacay maalintaas oo dhan,waana mid aad u muhiim ah inay dhacaan isku xidhkaasi ama la helaa”.sidaas waxa yidhi Prof Wen-Biao Gan oo bare ka ah jaamacadda New York University.
Daraasado hore oo laga sameeyey hurdada iyo samaynta ay ku lee dahay maskaxda ayaa lagu sheegay in hurdadu maskaxda ka nadiifiso waxyaalaha sunta ah,kana saarto,tanina waxay noqonaysaa mid kale oo kamid noqonaysa faa’idooyinka ay hurdadu u lee dahay maskaxda.
Daraasadan ayaa najiidada kazoo baxday lagu sheegay in hurdadu firfircoonaysiiso isku xidhka maskaxda iyo jidhka intiisa kale ,gaar ahaana ay muhiimada ugu weyni tahay isku xidhka maskaxda dhexdeeda,iyo kazoo saarista waxyaalaha khashinka suntan ah ee maskaxda soo gala ama ay soo dayso.
“habka nadiifinta ayaa doorweyn ka ciyaarta hagaajinta qaybta xusuusta ee maskaxda iyo waxbarashada,isla markaana qayb ka qaadata in dibada loo soo saaro waxyaalaha sunta iyo wasakhda ah ee maskaxda ku jira”.sidaas waxa kusoo gebo gebeeyey natiijadooda khubaradan daraasada wadey.